नजानेको पापबाट को नै अछुत छ र यहाँ ?
जलनको तापबाट को नै अछुत छ र यहाँ ?
भन्ने गर्छन् मान्छेहरु दयावान बन्नु पर्छ
पापिष्टको छापबाट को नै अछुत छ र यहाँ ?
सकेसम्म पाइतालाले किरा पनि नमरोस
भन्ने मीठो धापबाट को नै अछुत छ र यहाँ ?
सोच यहाँ सबैको छ दया धर्म गरी बाँच्ने
असत्यको खापबाट को नै अछुत छ र यहाँ ?
मानव भइे जन्म लियौं मानवता अँगालौ न
यो बिचारको मापबाट को नै अछुत छ र यहाँ ?
संसारको प्राणीमध्ये मानव नै अग्रसर छ
भन्ने चोखो नापबाट को नै अछुत छ र यहाँ ?